မလှောင်ပါနဲ့သားရယ် …ရှက်စရာမဟုတ်ပါ….လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး မလှောင်ပါနဲ့ – မြန်မာသတင်းစုံ
မလှောင်ပါနဲ့သားရယ် …ရှက်စရာမဟုတ်ပါ….လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး မလှောင်ပါနဲ့
Posted on December 15, 2020 Author admin	Comments Off on မလှောင်ပါနဲ့သားရယ် …ရှက်စရာမဟုတ်ပါ….လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး မလှောင်ပါနဲ့
ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ဒသေကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘှားတှကေို လူငယျတဈယောကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး မစူးစမျးမဆငျခွငျဘဲ Onlineပျေါ တငျလိုကျတယျ…..
သူတငျလိုကျတဲ့ပုံက ခဏအတှငျးမှာပဲ ပွနျ့သှားပွီး တဈခြို့က လှောငျကွ တဈခြို့က မလှောငျသငျ့ကွောငျးပွောကွတာပေါ့။
ဒါကို အဲ့ဒီလူငယျက မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောကျ အဘှားတှရှေိရာကို သှားပွီး အဘှားတဈယောကျကို သှားမေးတယျ…….
လူငယျ > ဘှားဘှား တဈခုလောကျမေးပါရစေ?
ဘှား၂> ရပါတယျ… မေးပါ သား….
လူငယျ > ဘှားဘှားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရငျ ဘာဖွဈလို့ ဝတျကောငျးစားလှ ဝတျပွီး မလာကွတာလဲ..?
သားတို့ မွို့ကွီးက လူတျောတျောမြားမြားက ဘုရားဖူး သှားကွရငျ ဝတျကောငျးစားလှတှေ ဝတျကွတယျ…။
ဘှား၂> ဒီလိုကှဲ့သား…အဘှားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ.ဘုရားဖူးဖို့. ဝတျကောငျးစားလှတှဝေတျမှ ဖူးရမယျလို့ ဘုရားကဟောလို့လား အဓိကက စိတျပဲသားရဲ့….
ဘှား၂> အဘှားတို့. ဖိနပျကို ခါးကွားညှပျလို့. သားက လှောငျရယျခငျြ ရယျနလေိမျ့မယျ…
ဒါက သားတို့မွို့ပွက လူတှကေို မယုံလို့လညျး မဟုတျပါဘူး….ဖိနပျပြောကျမှာ ကွောကျလို့လညျး မဟုတျပါဘူးသား…
ဘှား၂> ကိုယျ့ဖိနပျတှကေို ကိုယျနဲ့တပါးတညျးယူသှားတော့ အပျခမကုနျတော့ဘူး….လူတှမြေားတဲ့ ဘုရားပျေါမှာ ဖိနပျတှလေညျးမြားမှာလေ…
အဲ့ဒီအခါ တိုးဝှလေို့ကျရှာစရာမလိုတဲ့အတှကျ အခြိနျမကုနျတော့ဘူး..လိုရာခရီးကို မွနျမွနျသှားနိုငျတာပေါ့ သား…။
လူငယျ > ဟုတျကဲ့ ဘှားဘှား။ လူတှေ ဝိုငျးကွညျ့ပွီးရယျတော့ ဘှားဘှားတို့ ရှကျလား… ?
ဘှား၂> မရှကျပါဘူးသားရဲ့..သူမြားပစ်စညျးကို အဘှားတို့ခိုးပွီး ယူလာတာမှ မဟုတျတာ…
လူငယျ > ဟုတျ ဘှားဘှား ။ ဘှားဘှားတို့ဆီမှာလညျး အဲ့လိုပဲနကွေတာလား…?
ဘှား၂>ဟုတျတယျ သား…။ အဘှားတို့ဆီမှာက. ဝတျကောငျးစားလှ ဝတျပွီး စိတျဓာတျမကောငျးတဲ့သူတှကေို အထငျမကွီးကွဘူး…
ဆငျးရဲပမေဲ့ စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှကေိုပဲ အဘှားတို့ အထငျကွီးတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ သား လူတဈယောကျကို အပျေါယံကွညျ့ပွီး မလှောငျပါနဲ့လို့. အဘှားမှာခငျြတယျ။
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်တယ်…..
သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့။
ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်က မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို သွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ်…….
လူငယ် > ဘွားဘွား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ?
ဘွား၂> ရပါတယ်… မေးပါ သား….
လူငယ် > ဘွားဘွားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး မလာကြတာလဲ..?
သားတို့ မြို့ကြီးက လူတော်တော်များများက ဘုရားဖူး သွားကြရင် ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ကြတယ်…။
ဘွား၂> ဒီလိုကွဲ့သား…အဘွားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ.ဘုရားဖူးဖို့. ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်မှ ဖူးရမယ်လို့ ဘုရားကဟောလို့လား အဓိကက စိတ်ပဲသားရဲ့….
ဘွား၂> အဘွားတို့. ဖိနပ်ကို ခါးကြားညှပ်လို့. သားက လှောင်ရယ်ချင် ရယ်နေလိမ့်မယ်…
ဒါက သားတို့မြို့ပြက လူတွေကို မယုံလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး….ဖိနပ်ပျောက်မှာ ကြောက်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူးသား…
ဘွား၂> ကိုယ့်ဖိနပ်တွေကို ကိုယ်နဲ့တပါးတည်းယူသွားတော့ အပ်ခမကုန်တော့ဘူး….လူတွေများတဲ့ ဘုရားပေါ်မှာ ဖိနပ်တွေလည်းများမှာလေ…
အဲ့ဒီအခါ တိုးဝှေ့လိုက်ရှာစရာမလိုတဲ့အတွက် အချိန်မကုန်တော့ဘူး..လိုရာခရီးကို မြန်မြန်သွားနိုင်တာပေါ့ သား…။
လူငယ် > ဟုတ်ကဲ့ ဘွားဘွား။ လူတွေ ဝိုင်းကြည့်ပြီးရယ်တော့ ဘွားဘွားတို့ ရှက်လား… ?
ဘွား၂> မရှက်ပါဘူးသားရဲ့..သူများပစ္စည်းကို အဘွားတို့ခိုးပြီး ယူလာတာမှ မဟုတ်တာ…
လူငယ် > ဟုတ် ဘွားဘွား ။ ဘွားဘွားတို့ဆီမှာလည်း အဲ့လိုပဲနေကြတာလား…?
ဘွား၂>ဟုတ်တယ် သား…။ အဘွားတို့ဆီမှာက. ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူတွေကို အထင်မကြီးကြဘူး…
ဆင်းရဲပေမဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲ အဘွားတို့ အထင်ကြီးတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် သား လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး မလှောင်ပါနဲ့လို့. အဘွားမှာချင်တယ်။
ဈေးဆိုင် အိမ်ဆိုင် အွန်လိုင်းရှော့ အပါအဝင် ဈေးသည်မှန်သမျှ ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့ ယတြာအစီအရင် ဈေးဦးတောင် မပေါက်သော ၊အရောင်းအဝယ်အရမ်းကိုခက်ခဲ နေသော ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ အတွက် လက်တွေ့သိသိသာသာ ရောင်းကောင်း ဈေးဦးပေါက်စေသော ယတြာလေးတစ်ခု ပြောပြမယ်။ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆိုင်ထိုင် ရောင်းသောသူဖြစ်စေ ၊ဆိုင်ခန်းမရှိ ကား ၊လှည်း သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် လှည့်လည် ရောင်းချရသောသူ၊Online Shopping ၊ Live shopping အရောင်းအဝယ်သမားများ အားလုံး ယတြာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့ပြုလုပ်သော မည်သူမဆို ချက်ချင်းလက်ငင်းသိသိသာသာ ရောင်းဝယ်ကောင်းလာတာကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကို သကြားဖြူး၍ စားလိုက်ပါ။ တနင်္လင်္ာနေ့တွင် ဇီးထုတ် ၊ဇီးသီး မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။ အင်္ဂင်္ါနေ့တွင် ရှောက်ယို၊ရေနွေး မိမိအဆင်ပြေတာကို စားသုံးပါ။ […]
ရှကျတတျရငျ ဒီစာကို ဆကျမဖတျနဲ့…းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အနောကျနိုငျငံတှကေ Facebook ဆိုတာကို ထှငျပေးလိုကျတယျ ဖုနျးဆိုတာကို ထှငျပေးလိုကျတယျ…။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ဆီမှာ ဒီနအေ့ထိ စာအုပျဆိုငျတှေ ရောငျးကောငျးတုနျးပဲ စာအုပျစာပကေို ဖတျကောငျးတုနျးပဲ စာအုပျတိုကျတှေ အလုပျဖွဈတုနျးပဲ စာရေးဆရာတှေ အောငျမွငျတုနျးပဲ…။ ကိုယျတှဆေီမှာတော့ စာအုပျဆိုငျဆိုတာ အငွိမျးစားနဲ့ နိုငျငံခွားသားလောကျလာကွတယျ။ စာကွညျ့တိုကျဆိုတာ သရဲခွောကျမှာတောငျကွောကျရတယျ။ ရပျကှကျထဲက စာအုပျအငှားဆိုငျလေးတှေ ကွကျပြောကျ ငှကျပြောကျ ဖွဈကုနျတယျ။ စာပထေုတျဝရေေးတှေ တှကျခွမေကိုကျလို့ ပိတျသိမျးကုနျကွတယျ။ စာရေးဆရာတှမှော နာမညျသာရှိတယျ ခမျြးသာဖို့ဝေးစှ ခြောငျလညျဖို့တောငျ အနိုငျနိုငျ…။ တခြို့သော လူငယျဆိုသူတှကေိုကွညျ့လိုကျပါ.. တဈနတေ့ဈနေ့ ဖုနျးကို လကျညှိုးနဲ့ ပှတျလိုကျ.. လကျမနဲ့ဖိလိုကျ၊ ပှတျဆှဲလိုကျ၊ နှိပျထညျ့လိုကျ.. အလုပျမှာလညျး ဒါပဲ.. စာသငျခနျးထဲလညျး ဒါပဲ.. ဘတျဈကားပျေါလညျး ဒါပဲ.. […]
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားကိုလက်နဲ့စမ်းပြီး ဗေဒင်ဟောတဲ့အဘိုးအို
ဗေဒင်ပညာဆိုတာကတော့ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ယနေ့အချိန်ထိတည်ရှိနေပြသေးသလို တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလည်းဟောပြောနည်းတွေက မတူကြပါဘူး။ထို့အတူပဲ တရုတ်နိုင်ငံက ဗေဒင်ဟောဆရာတစ်ဦးရဲ့ ဟောပြောနည်းပုံစံကတော့ အခြားသူတွေထက် အနည်းငယ်ထူးခြားလို့နေပါတယ်။ သူဟောပြောတဲ့ပုံကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားကို လက်နဲ့စမ်းသပ်ပြီးဟောပြောတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဘိုးအိုဟာ အခုလိုဟောပြောနိုင်ဖို့အတွက် သူ့ဘဝသက်တမ်းတစ်ဝက်လောက်ထိကို အချိန်ပေးကာ ကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူဗေဒင်ဟောဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သာကို စမ်းတဲ့အခါမှာလည်း တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ သူ့ကိုပါးရိုက်တာတွေ ကန်ကျောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ကတော့ သူ့ကျိုးစားလေ့လားထားတဲ့ ပညာကိုတော့ အလကားအဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက် ဆက်လက်ပြီး ပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဘိုးအိုကို လူတွေသိလာခဲ့ရတာကတော့ သူဗေဒင်ဟောနေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို လူတစ်ယောက်ကရိုက်ကူပြီး လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့ရာမှ ဒီအဘိုးအိုကို လူအများသိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ အဘိုးဗေဒင်ဟောတဲ့အချိန်မှာ သူမတို့ရဲ့ရင်သားကို လျောလျောလျူလျူပေးကိုင်ကြပေမယ့် သူမတို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကတော့ အဘိုးအိုကိုသဘောမတွေ့ကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အဘိုးအိုဟာ သူ့ရဲ့ပညာကို မသမာသူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်လည်း တပည့်လုံးဝမမွေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ source – Expection Unicode အမြိုးသမီးတှရေဲ့ […]